Isiwalungisile amaphutha iSuperSport - Impempe
Isiwalungisile amaphutha iSuperSport
Abadlali beSuperSport United bathole ithuba elanele lokuzinuka amakhawapha ngesikhathi esimqoka kwazise isizini isiyela ngasemaphethelweni ngokubona kukakaputeni wabo uRonwen Williams.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule iSuperSport ibibalwa namaqembu asembangweni wesicoco seDStv Premiership kodwa imiphumela yakamuva isifake ibohlololo kulokho.
Iwini iyigcine ngoFebhuwari 13 inqoba ngo 2-1 kwiCape Town City okuyiyona abazobhekana nayo ngoMgqibelo ngo 3 ntambama, eCape Town Stadium.
Kusukela iwine lapho iSuperSport idlale ngokulingana kulandelana neKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates.
Lokhu kulandelwe induku ka 1-0 kuMaZulu kwase kuthi kweyokugcina emibili leli qembu likaKaitano Tembo ladlala ngokulingana neTS Galaxy neStellenbosch FC.
Ngemuva kwalokhu iSuperSport ihlale isikhathi esicela enyangeni ingadlali njengoba isiphinda nezikaJan Olde Riekerink.
“Bayiqembu elinzima futhi badlala ibhola elihle konke okukhomba ukuthi siyothwala kanzima eKapa. Okuhle ukuthi siyazi ukuthi kunjani ukubashaya (njengoba senzile ezinyangeni ezimbili ezedlule) ngakho kufanele siye kulo mdlalo ngalelo lukuluku.
“Bayingozi kakhulu kithi ngoba babhekene nesimo esithi asifane nalesi esikusona ngokwemiphumela,” kusho lo kaputeni.
Nakuba kunjalo kodwa uWilliams kuyamkhulula ukuthi bathole ithuba elanele lokuziqhutha amakhizane.
“Siphumule ngokwanele saze senza nezinto ezizokhulisa ubudlelwano bethu singabadlali ngaphandle nangaphakathi enkundleni.
“Uma ubheka imiphumela yethu yakamuva iyakhombisa ukuthi kuningi vele obekufanele sikulungise ngaleli thuba lokuphumula ebesilitholile.
“Senze amaphutha amaningi silahla amathuba okuqoqa amaphuzu ngakho ukungadlali isikhathi eside kusinike ithuba lokuzinuka amakhwapha thina singabadlali.
“Kunezindawo eziningi esikhombise ukuba buthaka kuzo ngakho uma kuvela ithuba lokuzilungisa lezo zindawo nakanjani kumele silisebenzise. Isizini isiyela ngasemaphethelweni ngakho amaphutha awasadingeki,” kusho uWilliams.
ISuperSport isendaweni yesine kwi-log lapho isidlale khona engu-21 yaqoqa amaphuzu angu-35. Ngaphezulu kwayo kuhleli AmaZulu (35), Golden Arrows (35) neMamelodi Sundowns (43).
Previous Previous post: UFrosler ufuna ingatatazeli iChiefs eGuinea
Next Next post: Kuyazwela kuMbali ukugqoza kwemijaho